Iyadoo aan la raacin Wicitaan, Ololahaaga Asteynta ayaa sii kordheysa | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Khamiista, Noofembar 5, 2015 Douglas Karr
Waxaan leenahay macmiil shirkadeed oo leh waaxyo dhowr ah oo ku dhex jira suuq-geynta… xiriirka dadweynaha, warbaahinta soo jireenka ah, ka faa'iideysiga mashiinka raadinta, suuqgeynta moobiilka, horumarinta waxyaabaha iyo waxyaabo kale oo badan. Sanadkii la soo dhaafey, waxaan ognahay in taraafikada iyo isu-beddelka SEO iyo nuxurka ay laba jibaarmeen maxaa yeelay Analytics si fiican loogu dhex daray goobta.
Waxaa jira dhibaato aad u weyn, in kastoo. Waaxdooda suuqgeyntu waxay adeegsataa isla lambarka taleefanka dhammaan ololeyaasha iyadoon loo eegin dhexdhexaad. Natiijadu waxay tahay in qof kasta oo ugu yeera shirkadda loo aaneeyo asal ahaan warbaahinta dhaqameed. In kasta oo aanu shaki ku jirin in warbaahinta dhaqameedku wicitaanada wicitaanada, macmiilku uu si xad dhaaf ah u qiimeynayo saameynteeda isla markaana uu dhayalsanaayo saameynta ay ku yeelanayso warbaahinta dhijitaalka ahi maxaa yeelay iyagu kama dhinna raad raadin.
Waa maxay Raadinta Wicitaanka?
Inta badan ganacsiyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn waxay leeyihiin nidaamyo taleefan oo u oggolaanaya wicitaano taleefanno badan in si caqli-gal ah loogu gudbiyo gudaha shirkad. Istaraatiijiyadaha ayaa jira hadda oo aad si sax ah ula socon karto isha ololaha ee wicitaanka taleefanka adoo beddelaya lambarka taleefanka ee olole kasta. Qeybta boostada tooska ah waxay lahaan kartaa hal lambar taleefan, degel lambar taleefan kale, ganacsi telefishan ah iyo lambar nambar kale.
Adeegyadu way jiraan kuwaas oo u oggolaanaya shirkadaha inay ku daraan lambarrada taleefannada u gaarka ah ololayaasha waxayna u adeegsadaan si ay si sax ah ula socdaan wicitaanada. Nidaamyadan ayaa isbeddelay waxayna ku siin karaan xitaa saxnaan dheeri ah - si firfircoon u beddelaya lambarka taleefanka ee ku yaal bartaada iyada oo ku saleysan ilaha gudbinta si aad awood ugu yeelatid raadinta raadinta, bulshada, emaylka iyo ololeyaasha kale si sax ah. Adeeggaas ayaa loo yaqaan raad raadin (dheeraad ah: sharaxaadda fiidiyowga ee raadinta wicitaanka).
Maxay uga Faa'iidaysan Raadinta Wicitaanka?
Iyadoo in ka badan 2 bilyan oo taleefannada casriga ah isticmaalka adduunka oo dhan, safarka macmiilku wuxuu noqonayaa mid sii adkaanaya, iyadoo dadku u kala wareegayaan moobiillada, desktop-ka, qasabno iyo wicitaanno. Teknolojiyaddu waxay sii wadaa inay webka ku darsato moobiil, sidoo kale. Qalab badan ayaa si otomaatig ah u aqoonsada lambarrada taleefannada ee codsiyada iyo daalacashada oo si fudud ayaad u gujin kartaa si aad u wacdid. Sidoo kale, waad awoodaa hyperlink lambarka taleefanka gudahood macnaha goobta. IPhone waxay soo saartay shaqeynta u fidineysa taleefankaaga casriga ah kumbuyuutarkaaga si aan kala go 'lahayn si aad ugu isticmaali karto kombuyuutarkaaga wicitaanada taleefanka.
The kanaalka wicitaanka soo gala si dhakhso leh ayuu u korayaa, laakiin suuqleydu sawir cad kama hayaan oo ololeyaal ah ayaa horseed u ah tayada ugu sareysa. La'aanshaha xogta si loogu xiro isdhexgalka internetka iyo khadadka kala duwan, sida wicitaanada, waxay ku kici kartaa shirkadaha malaayiin fursado dakhli oo seegay. Infograafigani ka yimid Wicitaanada waxay bixisaa taariikh ku saabsan sababta ay suuqleydu ugu baahan yihiin inay ka fekeraan xogtooda suuq-geynta marka la eego labada wicitaano iyo qasabno.
An ebook la socda waxay bixisaa talo wax ku ool ah oo ku saabsan sida suuqyayaashu ugu dari karaan sirdoonka wicitaankooda aaladda, hagaajinta wicitaanada sida qasabadaha si loo wado hoggaan tayo sare leh.
Adduunyada guurguura, Invoca waxay siisaa sirdoonka wicitaanka daruurta suuqgeynta si ay uga caawiso suuqleyda inay kaxeeyaan wicitaannada soo galaya oo ay u beddelaan iib. Barxadda Invoca waxay soo bandhigeysaa wicitaanka wicitaanka sirdoonka ee looga baahan yahay suuqleyda inay qabsadaan oo ay hagaajiyaan ka-qaybgalka macaamiisha iyo iibka wixii ka baxsan gujiska. Marka laga soo bilaabo ujeedo ilaa ujeedo, suuqleyda waxay helayaan faham buuxa oo ku saabsan safarka macaamilka ee goobaha dhijitaalka ah ee dijitaalka ah, mobilada iyo khadadka si ay u wanaajiyaan qarashkooda suuqgeynta, u wicitaanada tayada ee wicitaannada soo gala una gaarsiiyaan khibrad macmiil wanaagsan.
Tags: dhacaraad raadininfographicinvocalambarka taleefankatelefoonka raadraaca
5-ta Talaabo ee Aasaasiga ah ee Bilaabida Dhisida Liiska Emailkaaga
30, 2014 at 4: 59 AM
Maqaal weyn! Waxaan si buuxda kuugu raacsanahay in raadinta wicitaanku ay leedahay saameyn weyn waxayna ka caawineysaa ganacsiyada inay qiimeeyaan mid kasta oo ka mid ah ololahooda suuqgeynta waxtarka waqtiga dhabta ah una oggolaanaya iyaga inay gaaraan go'aanno deg deg ah oo ku filan iyo hagaajin si loo kordhiyo ROI.
Waad ku mahadsan tahay maqaalka weyn!
31, 2014 at 6: 10 PM
Waxaad sharad! Mahadnaq ereyada naxariista leh.